Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Guushii Xulka Qaranka Somaliya Kasoo Hooyey Isreeb-reebka Koobka Adduunka - Jigjigaonline
HomeSomalidaMadaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Guushii Xulka Qaranka Somaliya Kasoo Hooyey Isreeb-reebka Koobka Adduunka
Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Guushii Xulka Qaranka Somaliya Kasoo Hooyey Isreeb-reebka Koobka Adduunka
September 6, 2019 admin Somalida, Wararka Maanta 0
Muqdisho (JigjigaOnline) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay natiijadii guusha ahayd ee xulka qaranka Somaliya uu ka gaadhay ciyaar ay maanta la yeesheen Zimbabwe, taas oo ka tirsanayd isreeb-reebka Koobka Adduunka ee 2022 lagu qaban doono waddanka Qatar.
Ciyaartan oo ka dhacday waddanka Djibouti oo dalka Somaliya uu kulamadiisa martida loo yahay ku qaabbilo maadaama aanay Muqdisho ammaan ahayn, ayaa waxa xulka Soomaalidu ku adkaadeen 1-0.
Dad badan oo Soomaali ah oo ka daawanayey telefishannada iyo kuwo kala socday Internet-ka ayaa hambalyooyin kasoo buuxiyey baraha bulshada, waxaanay guushaasi u ahayd sidii ay ku guuleysteen Koob Adduun oo kale.
Madaxweynaha Dawladda Federaalka Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay waxa uu soo saaray qoraal uu ku baahiyey bartiisa Twitterka, waxaana uu ugu hambalyeeyey ciyaaryahannada, isagoo sidoo kalena ku caddeeyey natiijada uu doonayo inay kulanka labaad kasoo gaadhaan dalka Zimbabwe oo magaalada Harare ay xiddigaha Somaliya tegi doonaan.
Qoraalka uu soo saaray Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ku sheegay inuu u rajaynayo ciyaartoyga Somaliya in kulanka soo socda ee Zimbabwe ay martida u noqon doonaan inay kusoo badiyaan 2-0.
“Waxaad sharaf u soo hoyseen dalkiinna iyo dadkiina, waxaana idiin rajeynayaa inaad guul kala soo noqotaan lugta 2-aad ee ciyaartan.” ayuu yidhi Madaxweyne Farmaajo.
Midowga Afrika oo go’aan niyad jab ku ah KENYA ka qaatay kiiska badda Ee Somaliya Kala Dhexeeya